El Diablo Discover ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Isa hunyengeri padivi uye wedzera kuda kwako uye chivimbo.
Zvinoreva tarot kadhi «Dhiyabhorosi»
Kadhi raDhiyabhorosi Tarot rinoratidza nzvimbo yekutadza - yetsika yakarambwa yemusango uye iro rima divi iro mumwe nemumwe wedu inotakura mukuziva kwedu. Uyu mumvuri uri pakati chaipo pedu, izvo zvatisingakwanise kubvisa uye zvatisingazombokwanisa kudzora. Kubva pamavhezheni ayo ekutanga, aimiririra vampire-dhimoni, Dhiabhori akaburitsa kutya kuti munhu anogona "kurasikirwa nomweya wake." pamaoko emasimba emusango uye anodakadza.
Mufananidzo waDhiyabhorosi uyo yakabuda pakati pezana ramakore rechi XNUMX inotipa dudziro yakaomesesa: iya ya "mwarikadzi wembudzi", ane zita reesoteric Baphomet. Mahombekombe emvura ane chishuwo chekuda uye kushuvira zvinopa simba kuedza kwako kukurira kumanikidzwa kwemabasa akaomarara uye nekuona rusununguko rwechokwadi rwemweya.
Regedza inhibitions. Zvibvumire kutaura zvese zvauri.
LTsamba yadhiyabhorosi inokuraira kuti uratidze zvimwe zvivindi. Panogona kunge pasina chekuwana nekuyedza kuve nehunyengeri kana kuronga mune ino mamiriro. Simbisa ajenda yako, taura pachako nekuvimbika uye rega machipisi awire kwavanogona. Kubheja kwako kwakanyanya kungave kuratidza moyo wako wechokwadi, pamwe kusanganisira kutsamwa
Bvuma kuti iwe une chero manzwiro aunayo. Kunyangwe zvingave zvisina kudikanwa kuti uite pane manzwiro aunoita mumamiriro ese ezvinhu, kukumbira simba uye kudzika kwechiitiko chako chemukati chinokutendera iwe kuti ugare wakatendeka kwauri pachako.